Muxuu salka ku hayaa khilaafka soo kala dhex galay madaxweyne Florentino Perez & Zinedine Zidane? – Gool FM
(Madrid) 18 Luulyo 2019. Waxaa lagu soo warramayaa inuu khilaaf curdun ah soo kala dhexgalay madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez iyo tababare Zinedine Zidane kuwaas oo ku kala aragti duwan mustaqbalka xiddiga reer Spain Dani Ceballos.
22-jirkaan ayaa qarka u saaran inuu heshiis amaah ah ugu biiro kooxda Arsenal, wararka ka imaanaya Spain ayaana sheegaya in Zidane uu doonayo in xiddigaan la iibiyo gabi ahaantisa, si lacagaha lagu helo madaxiisa ay ugu isticmaalaan xoojinta kooxda.
Si kastaba Florentino waa mid ka ra’yi duwan Zidane, wuxuuna doonayaa in xiddigaan uu kaliya amaah ku baxo, isagoo dareensan inuu yahay xiddig mustaqbalka dambe anfici kara kooxa boqortooyada.
Xiddigaan sidoo kale lala xiriirinayo Tottenham Hotspur ayaa dhaliyay 3-gool, 34-ciyaarood uu kooxdiisa u saftay fasal ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Los Blancos waxey diyaar u tahay iney dhageysato dalabyada laga soo gudbinayo 9-ka mid ah xiddigaheeda.